ॐ लेखी भेटी स्वरुप एक सेयर गर्दै दर्शन गरी ,आजको राशिफल हेर्नुहोस्
राशिफल श्रावन ११ गते २०७७ वि.स. आइतवारको राशिफल दर्शन स्वरुप एक सेयर हेर्नुहोस् ।
वि.सं२०७७ श्रावन ११ आइतवार ईसवी2020 Jul 26, Sunday नेपाल संवत1140 गुलाथ्व षष्ठी-6 सूर्य5:24☀️, 18:58🌤 चन्द्र10:55☽, 23:06☾
तिथिषष्ठी upto 9:49:34, उपरान्त: सप्तमी पक्षश्रावन शुक्ल पक्ष 🌓 नक्षत्रहस्त upto 12:54:57, उपरान्त: चित्रा
योगसिद्ध upto 24:0:56, उपरान्त: साघ्य करणतैतिल upto 9:49:34 चन्द्र राशिकन्या ♍ upto 24:6:53, उपरान्त: तुला ♎
दिनमान33 घडी 55 पला – 13hr 34min ऋतुवर्षा-Monsoon आयानदक्षिणायन
Aries मेष (चू,चे,चो,ला,लि,लू,ले,लो,अ):
लाभ,हानी,आय,व्यय,सुख,दुख वरावरी मध्यम खालको दिन छ । विपरीत वर्गप्रति आकर्षण बढ्नेछ । नयाँ कार्यको योजना बन्नेछ । आम्दानी सामान्य भए पनि ठूलो खाँचो टर्नेछ। खर्च भए पनि विभिन्न अवसरले पछ्याउनेछन्। मेहनत गर्दा अवसर भने पाइनेछ।
साउन १० देखि १६ गतेसम्म मेष राशि को राशिफल
यो साता प्राविधिक काममा सफलता मिल्ला । दुरदराजमा रहेका साथी भाई र आफन्तजनसँग सम्बन्ध कायम हुनेछ । राजनैतिक कार्यमा सफलता मिल्नेछ । साताको उत्तरार्धबाट व्यापार व्यवसायमा बाधा आउनेछ । घर व्यवहारको समस्याले सताउनेछ । यो साताका लागि शुभअङ्क १,६ र शुभरङ्ग कलेजी वा घ्यूरङ्ग हो । शुभकर्म गर्नु पूर्व भगवतीको दर्शनगरी कार्य आरम्भ गर्दा अधिक सफलता मिल्नेछ ।
आजको दिन भाग्यशाली भएर देखा पर्नेछ । महिला वर्गबाट विशेष सहयमेग मिल्नेछ । शिक्षामा उन्नति एवं प्रगतिको वातावरण बन्नेछ । नयाँ व्यवसाय सुरु गर्ने मौका छ। महत्वपूर्ण काम गरेर दाम, इनाम र प्रतिष्ठा कमाउने बेला छ। पारिवारिक भेटघाटले प्रसन्नता मिल्नेछ।
एकपछि अर्को अवसर आउनाले मन प्रसन्न रहनेछ । नाता–कुटुम्बको आगमन हुने एवं परिवारमा नयाँ सदस्य थपिन पनि सक्ने सम्भावना छ । न्यायिक कार्यमा सफलता मिल्नेछ । साताको मध्य भागमा आफूलाई कमजोर भएको अनुभूति हुनेछ । घरायसी झमेलामा परिनेछ । यो साताका लागि शुभअङ्क २,६ र शुभ रङ्ग पहेंलो वा रातो रङ्ग हो । कुनै शुभकर्म गर्नु पूर्व दुर्गाजीको स्मरण गरी यात्रा गर्नाले सफलता मिल्नेछ ।
सामाजिक तथा धार्मिक कार्यमा रुची बढ्नेछ । प्रेमसम्बन्ध र प्रणयप्रसङ्गका लागि श्रेष्ठ समय रहेकोछ । दैनिक कार्यमा सफलता पाईनेछ । प्रयत्न गर्दा भाग्यले साथ दिनेछ। परिवारको सहयोगमा महत्वपूर्ण काममा सफलता मिल्नेछ। श्रमको उचित मूल्य पाइनुका साथै आम्दानी पनि बढ्नेछ।
यो साता नयाँ योजना कार्यान्वयनमा ल्याउन मुस्किल पर्नेछ । परिवारभित्रका झिनामसिना काममा धेरै समय खर्चनु पर्नेछ । मध्य साताबाट आकस्मिक धन लाभ हुनेछ । इच्छा र आकाङ्क्षा पूर्ण हुनेछ । सुन्दर पहिरनले ब्यक्तित्वमा निखारता ल्याउनेछ । यो साताका लागि शुभअङ्क ६,७ र शुभरङ्ग सेतो वा हरियो हो । कुनै शुभकर्म गर्नु पूर्व वा यात्रामा जानु अघि विष्णु भगवानको दर्शनगरी आरम्भ गर्दा लाभ मिल्नेछ ।
आज घर व्यवहारमा झमेला रहला । नयाँ योजना कार्यान्वयनमा ल्याउन मुस्किल पर्ला । आर्थिक कारोवारमा मन्दी आउनेछ । रमाइलो यात्राको अवसर जुट्न सक्छ। मन मिल्ने साथी भेटिनुका साथै प्रेमको बन्धन समेत कसिन सक्छ। अप्ठ्यारा कामको बोझ थपिने सम्भावना छ।
दैनिक कार्यमा प्रगति हुनेछ । समाजिक कार्यमा मन जाला । कूटनीतिक नियोगको सहयोग मिल्ला । शैक्षिक क्षेत्रबाट सफलता मिल्नेछ । सुरुमा केही खर्च लागे पनि सोचेको काम बन्नेछ। व्यवसायमा लगानी बढाउने मौका जुर्न सक्छ। असन्तुलित खानपानले पेटको समस्या आउने समय छ।
नयाँ काममा हात हाल्ने समय छ । आफ्नो क्षेत्रमा प्रभूत्त्व जमाउन सकिनेछ । रोकिएका काम पुनः सुरु हुन सक्छ । जीवनसाथीको सल्लाहमा गरिएको कार्यबाट अधिक सफलता मिल्नेछ । बुधबारबाट शैक्षिक क्षेत्र कमजोर रहनेछ । प्रेममा बाधाका साथै बन्न लागेको काम विग्रनेछ । यो साताका लागि शुभअङ्क १,७ र शुभरङ्ग सुन्तला हो । कुनै शुभकर्म गर्नु पूर्व देवीजीको दर्शनगरी कार्य आरम्भ गर्नाले लाभ मिल्नेछ ।
आज लगनशीलताले कामहरू अगाडी बढ्नेछन् । दाम्पत्य जीवन सुखमय हुनेछ । दिनको उत्तरार्ध अधिक सुखद् रहनेछ । प्रशंसकहरू बढ्नेछन् र मानसम्मान समेत पाइनेछ। प्रतिस्पर्धीहरूलाई सजिलै वशमा ल्याउन सकिनेछ। सहयोगीहरू जुट्नाले व्यवसायबाट प्रशस्त फाइदा उठाउने मौका छ।
यो साता आफ्नै दक्षतामा विभिन्न कार्यहरू सम्पन्न हुनेछन् । परिणाममुखी जिम्मेवारी वहन गर्ने समय आएको छ । एकपछि अर्को अवसर आउनाले मनपनि प्रसन्न रहनेछ । कला,साहित्य तथा संगीतमा रुचि बढ्नेछ । दाजुभाईले तपाईंका विचारलाई समर्थन गर्नेछन् । यो साताका लागि शुभअङ्क ३,६ र शुभरङ्ग हरियो वा गुलाबी हो । कुनै शुभकर्म गर्नु पूर्व शिवजीको ध्यान गरी कार्य आरम्भ गर्दा अधिक लाभ हुनेछ ।
मनमा शान्ति र अनुहारमा कान्ति छाउनेछ । विशिष्ठ व्यक्तिको साथ पाईनेछ । छोटो दुरीको यात्रा रहला । शुभकार्यको चर्चा चल्नेछ । आफ्नो क्षेत्रमा प्रभुत्व जमाउने समय छ। पैत्रिक सम्पत्तिको उपयोगबाट थप फाइदा उठाउन सकिनेछ। प्रतिष्ठित कामको जिम्मेवारी पाइनेछ।
यो साता काम बिगार्न चाहनेहरू अगाडि बढ्न सक्छन् र मनमा दुविधा उत्पन्न हुन सक्छ । स्वरोजगारीका निम्ति दौडधूप गर्नुपर्ने हुन सक्छ । मध्य साताबाट प्रेमीको सहयोग पाईनेछ । अनुहारमा कान्ति र मनमा शान्ति छाउनेछ । आर्थिक क्षेत्रमा सफलता मिल्नेछ । यो साताका लागि शुभअङ्क ५,७ र शुभ रङ्ग सेतो वा रातो हो । कुनै शुभकर्म गर्नु पूर्व शिवजीको दर्शन गरि गरेको कार्यबाट अधिक सफलता मिल्नेछ ।
Scorpio बृश्चिक (तो,ना,नी,नू,ने,नो,या,यी,यू):
आज नयाँ र शुभ कार्यको चर्चा चल्नेछ । आफ्नै दक्षतामा विभिन्न कार्यहरू सम्पन्न हुनेछन् । इच्छा र आकाङ्क्षा पूर्ण हुनेछ । विगतका कमजोरी सच्याउने मौका मिल्नेछ। विशिष्ट व्यक्तित्वको सहयोग जुट्नाले विशेष अवसर पाइने समय छ। व्यापार ब्यबसायबाट लाभ मिल्नेछ।
यो साता मन अध्यात्म र दर्शनतर्फ आकर्षित बन्नेछ । गोपनीय ढङ्गले गरिएको क्रियाकलापमा सफलता पाउनुहुनेछ । कसैकसैका लागि सन्तान प्राप्तिको योग छ । साताको मध्यमा नियम र अनुशासनलाई बेवास्ता गर्दा अवसर र लाभ गुम्न सक्छ । यो साताका लागि शुभअङ्क १,८ र शुभरङ्ग खैरो वा रातो हो । कुनै शुभकर्म गर्नु पूर्व भैरवजीको आरधना गरी कार्य आरम्भ गर्दा अधिक सफलता मिल्नेछ ।
आज परिवारमा रमाइलो जमघट हुनेछ र अभिभावकले सन्तुष्टि जनाउने छन् । प्रतियोगितात्मक क्रियाकलापबाट लाभ मिल्नेछ । काममा सुधार आउनुका साथै आस मारेको काम बन्नाले उत्साहित भइनेछ। एउटै कामबाट दोहोरो लाभ मिल्नेछ। समुदायको हितमा गरिएका कामको तारिफ हुनेछ।
यो साता परोपकारजन्य कार्यमा लगाव बढ्ने र धनसञ्चयको अवसर प्राप्त हुनेछ । मित्र वा आफन्तबाट मिल्नेछ । दैनिक कार्यमा प्रगति हुँदै जानेछ । मनमा हर्ष,उमङ्ग र उत्साह रहला । हाँसखेल र मनोरञ्जनपूर्ण समय बित्ला । यो साताका लागि शुभअङ्क ४,९ र शुभरङ्ग गुलाबी वा घिउरङ्ग हो । कुनै शुभकर्म गर्नु पूर्व वा यात्रामा जानु अघि महासरस्वतीको दर्शनगरी कार्य आरम्भ गर्दा सफलता प्राप्त हुनेछ ।
Capricorn मकर (भो,जा,जी,जू,जे,जो,ख,खी,खू,खे,खो,गा,गी):
लामो समयदेखि प्रतीक्षा गरिएको काम पूरा हुनेछ । आदर्श ब्यक्तित्व सँगको सहकार्यले नयाँ अनुभव मिल्नेछ । प्रतिष्ठा कमाउने वेला छ । सामान्य कामबाट राम्रो लाभ उठाउन सकिनेछ। लगनशीलताले महत्वपूर्ण काम दिलाउन सक्छ। मानसम्मान पनि पाइनेछ।
यो साता रचनात्मक कार्यमा जुट्दा फाइदा हुने समय छ । दुरदराजमा रहेका आफन्तजनसँग सम्बन्ध कायम हुनेछ । परीक्षा आदि प्रतिस्पर्धामा उर्तिण हुनसकिनेछ । प्रेम र मित्रताको बन्धन कसिनुका साथै दाम्पत्य सुखमा रमाउने समय छ । यो साताका लागि शुभअङ्क २,७ र शुभरङ्ग निलो वा सेतो हो । कुनै शुभकर्म गर्नु पूर्व वा यात्रामा जानु अघि भैरवजीको दर्शनगरी कार्य आरम्भ गर्दा अधिक सफलता मिल्नेछ ।
आज नयाँ कार्य योजना कार्यान्वयनमा ल्याउन मुस्किल पर्ला । व्यस्ततापनि बढ्नेछ, तर साँझमा शुभ समाचार सुनना पाईएला । अध्ययन अध्यापनमा प्रगति हुनेछ। बोलीको प्रभावले धेरैलाई आकर्षित गर्नुका साथै सजिलै काम बनाउन सकिनेछ। रमाइलो यात्राको योग रहेको छ।
नयाँ–नयाँ ज्ञान सिक्ने मौका मिल्नेछ । दाजुभाई वा नजिकका मित्रले सहयोग गर्नेछन् । करियरको क्षेत्रमा मन मिल्ने साथीको सुझावले महत्त्वपूर्ण भुमिका निर्वाह गर्नेछ । विद्या र बुद्धिको विकास हुनेछ, तर अल्छीपन नत्यागेमा आँटेको काममा सफलता नमिल्न सक्छ । यो साताका लागि शुभअङ्क २,६ र शुभ रङ्ग सेतो वा निलो रङ्ग हो । कुनै शुभकर्म गर्नु पूर्व विष्णुजीको आरधना गरी यात्रा गर्नाले सफलता मिल्नेछ ।
दाम र इनाम कमाउने वेला छ । कुटुम्बको सहयोग मिल्ला । घरमा अतिथीको आगमन हुनेछ । राजनैतिक कार्यमा सफलता मिल्नेछ । विशिष्ट व्यक्तित्वको सहयोग जुट्नाले विशेष अवसर पाइने समय छ। दिगो फाइदा हुने काम शुभारम्भ गर्ने अवसर जुट्नेछ।
लामो समय देखि रोकिएको अधुरो कार्यले पूर्णता पाउनेछ । अनुहारमा कान्ति र मनमा शान्ति छाउनेछ । परोपकारका क्षेत्रमा लगानीको समय छ । साताको अन्त्यमा कलहको योग भएकाले कसैसँग बोल्दा वा ठट्टा गर्दा सतर्कता अपनाउनुहोला । यो साताका लागि शुभअङ्क ४,९ र शुभरङ्ग सुन्तला हो । कुनै शुभकर्म गर्नु पूर्व विघ्नहर्ता गणेशजीको पूजा अर्चना गरि गरेको कार्यबाट लाभ मिल्नेछ ।
आजको राशिफल – यी राशिफलहरुमा संकट । ॐ लेखी पढ्नु होस् संकट टर्छ।
नेपाल अनलाइन पत्रिका - October 9, 2020 0
आजको राशिफल - यी राशिफलहरुमा संकट । ॐ लेखी पढ्नु होस् संकट टर्छ।
असोज २० गते मंगलवारको राशिफल हेर्नुहोस्
नेपाल अनलाइन पत्रिका - October 6, 2020 0
आज असोज १८ गते आइतबारको राशिफल पढ्नुहोस् ।
नेपाल अनलाइन पत्रिका - October 4, 2020 0
वि.सं.२०७७ साल असोज १८ गते । आईतबार । ईश्वी सन् २०२० अक्टोबर ०४ तारिख । नेपाल संवत् ११४० । प्रमादी संवत्सर । दक्षिणायन । शरद ऋतु । श्रीशाके १९४२ । अधिक आश्विन कृष्णपक्ष । तिथि–तृतीया,अहोरात्र । नक्षत्र–अश्विनी,१३ घडी ०५ पला,बिहान ११ बजेर १२ मिनेट उप्रान्त भरुणी । योग–हर्षण,४३ घडी ३८ पला,बेलुकी ११ बजेर २५ मिनेट उप्रान्त बज्र । करण–वणिज,बेलुकी ०६ बजेर ३२ मिनेट उप्रान्त भद्रा । आनन्दादिमा–आनन्द योग । चन्द्रराशि–मेष । काठमाडौंमा सूर्योदय बिहान ०५ बजेर ५८ मिनेट,सूर्यास्त बेलुकी ०५ बजेर ४४ मिनेट ।
श्री पाथीभरा माताले सबैको कल्याण गरुन , हेर्नुहोस : आज असोज -१७ गते शनिबारको राशिफल
बि.सं.२०७७ साल असोज १७ गते शनिबार ई. सं. २०२० अक्टुवर ३, नेपाल सम्बत ११४० अनालागा द्धितीया प्रमाधि नामक संवत्सर, सूर्य दक्षिणायन, शरद ऋतु, अधिक असोज कृष्ण द्धितीया, चन्द्रमा मीन राशिमा, रेवती नक्षत्र, व्यागात योग, तैतल करण ।